Chinwiwa fekitori - China Chikafu zvinogadzira, vatengesi
Mutambo wePalace Veji Vegetarian Nyama
Mapuroteni epamusoro, Kudya kwemiriwo, Nyama dzinotsiva
Zvinonhuwira, zvakaomarara uye zvinopenga, chidimbu chimwe nechimwe chinonaka
Inotapira zvinonhuwira, high-protein soy zvigadzirwa
Zvinonhuwira uye zvine moyo wakaringana, sarudzo yekutanga kune vanofarira chikafu chinonaka.
Nyoro Spicy Bean Curd Slice
Spicy Bean Curd Slice (zita reChinese Latiao kana Lapian), inozivikanwawo seinonhuhwirira guten, nyama yemombe inodyiwa nyama yemombe uye zvichingodaro, imhando yezvikafu zvekudya zvinogadzirwa nefurawa yegorosi, zvimwe zviyo nebhinzi sezvinhu zvikuru zvakagadzirwa. Munguva pfupi yapfuura inova chikafu chinozivikanwa zvakanyanya muChina nenyika zhinji pasi rese.
Yakatetepa, yakapfava uye inonhuhwirira, yepakati inonaka
Yakamonana Spicy Bean Curd (Spice strip)
Curly Spicy Bean Curd (zita reChinese Latiao), rinozivikanwawo sevirusi inonaka, nyama yemombe inogadzirwa nemiriwo zvichingodaro, imhando yechikafu chinodyiwa chakagadzirwa nefurawa yegorosi, zvimwe zviyo nebhinzi sezvinhu zvikuru zvakagadzirwa. Munguva pfupi yapfuura inova chikafu chinozivikanwa zvakanyanya muChina nenyika zhinji pasi rese.
Yakasarudzika Spicy Bean Curd Slice
Yedu Vacuum yakakangwa zvigadzirwa zvinogadzirwa kubva ku100% miriwo mitsva nemichero, ichichengetedza iyo yekutanga vara, chimiro uye kuravira kwemiriwo (michero) muchitarisiko chakanaka.
Isu tinongoshandisa mafuta emuchindwe ane hutano, anonamirwa nyore uye anopinza. Uye zvigadzirwa zvese zvinoshandisa chete mafuta kamwe chete, usashandise zvekare! 100% yechisikigo, isina yakadzika yekutsvaira, hapana zvinowedzera, hapana zvinodzivirira. Kusvika ku 95% zvinovaka muviri zvakachengetedzwa, mafuta mashoma, koriori yakadzika, zvinovaka muviri zvakanyanya, fiber yakawanda.
Hawthorn zvese zviri zviviri chikafu nemishonga, sekureva kwetsika yechinyakare Chinese mushonga, hawthorn ine zvirinani mhedzisiro, inokanganisa chikafu, kumisa ropa, kumwaya stasis. Mushonga wemazuva ano waratidzwa kuburikidza nekutsvaga, hawthorn ine organic acid, iyo inogona kuwedzera yekugaya enzyme secretion. Uye zvakare, hawthorn ine mhedzisiro yekunyorovera tsinga dzeropa. Inonyanya kufarirwa nevakwegura nevana.Hawthorn lollipop ndicho chigadzirwa chedu chitsva chakagadzirwa chevana uye vechidiki.
Sayenzi reshiyo, inotapira uye yakasviba zvine mwero, yakanyatso sarudza zvinhu, yakachena kuravira.
Isu tiri chete tine zero yekuwedzera.
Nakidzwa nehunhu, ramba kushomeka.
Yekutanga Hawthorn Rolls
Hawthorn zvese zviri zviviri chikafu nemishonga, sekureva kwetsika yechinyakare Chinese mushonga, hawthorn ine zvirinani mhedzisiro, inokanganisa chikafu, kumisa ropa, kumwaya stasis. Mushonga wemazuva ano waratidzwa kuburikidza nekutsvaga, hawthorn ine organic acid, iyo inogona kuwedzera yekugaya enzyme secretion. Uye zvakare, hawthorn ine mhedzisiro yekunyorovera tsinga dzeropa. Inonyanya kufarirwa nevakwegura nevana.Hawthorn roll, inozivikanwa zvakare se hawthorn coil, ndiyo yakajairika uye inonyanya kuzivikanwa mhando pakati peiyo Haw zvigadzirwa zvigadzirwa.
Yekutanga Hawthorn Strips
Hawthorn zvese zviri zviviri chikafu nemishonga, sekureva kwetsika yechinyakare Chinese mushonga, hawthorn ine zvirinani mhedzisiro, inokanganisa chikafu, kumisa ropa, kumwaya stasis. Mushonga wemazuva ano waratidzwa kuburikidza nekutsvaga, hawthorn ine organic acid, iyo inogona kuwedzera yekugaya enzyme secretion. Uye zvakare, hawthorn ine mhedzisiro yekunyorovera tsinga dzeropa. Inonyanya kufarirwa nevakwegura nevana.Hawthorn srwendo ndiyo yakasarudzika uye inonyanya kuzivikanwa mhando pakati peiyo Haw zvigadzirwa zvigadzirwa.
Nzungu dzinonhuwirira uye nzungu dzakarungwa munyu zvinonaka zvekudya zvechivanhu zvinogadzirwa nenzungu. Nzungu dzine vhitamini E uye imwe huwandu hwe zinc, dzinogona kusimudzira ndangariro, kupokana nekukwegura, kunonoka kudzikira kwehuropi, nekunyorovesa ganda.
Yakachena Shandong nzungu, inogadzirwa muJiaodong Peninsula.
Natural ivhu jecha, angangoita 180 mazuva ekukura nguva.
Izvi zvinoita nzungu pano dzakakura, dzakapfavirira, dzinotapira uye dzinovaka muviri,
Nekudaro tichiisa chimiro chechokwadi uye chinonaka chemanzungu edu anonhuwirira.
Frozen Yakakangwa Yakatapira Mbatata
Kubva padanho rese rekusimudza mbeu, kudyara, kuchengetedza, kugadzirisa uye kugadzira, zvinyatso kushandisa iyo yakasvibirira chikafu kugadzirwa tekinoroji mashandiro emitemo.
Iva nezviuru zvemaeka emajasi ekudyara, epamusoro-magumo michina, epamberi tekinoroji.
Yakakangwa mumatanho mana akasiyana-siyana, akabikwa endarama kuyerera kwemafuta neshuga, yakasvinwa mbatatisi mhino.
-38℃ kukurumidza kutonhora, kiya kutapira uye chikafu, inogona kuchengetedzwa kwenguva yakareba.
Yakasarudzwa yaunzwa poda mbatatisi, yakasiyana neyechinyakare yakakangwa mbatatisi machipisi, imhando yechikafu chisina-chakakangwa chekuzorora chakanatswa nekubheka. Iko kune ese gumi ese eviravira kuravira; Tora dhizaini dhizaini, diki uye inofadza, inokodzera kudyiwa, ndiyo sarudzo yakanakisa kune vechidiki vane fashoni.
Shuwa-yakaputirwa Haws Pane Tsvimbo
Shuwa-yakaputirwa Haws paStick inonziwo Ice-shuga gourd, Bingtanghulu kana Tanghulu. Iyo yechinyakare Chinese chinwiwa, chakatangira muSouth Rwiyo Dzinza. Iyo tambo yemichero yemusango nematanda emishenjere akanyikwa mumaltose, inova yakaoma nekukurumidza kana paita mhepo.
Chikafu chakajairika munguva yechando kuchamhembe kweChina, chinowanzo gadzirwa nematanda e hawthorn. Inotapira zvinovava, inotapira uye inotonhora zvakanyanya kana yakaomeswa nechando.
Ice-shuga gourd ine inonakidza, inonatsa, inowedzera huchenjeri, kubvisa kuneta, kubvisa kupisa uye mamwe mabasa.
Hawthorn Strip, Kudya Nzungu Dzakarungwa, Soy Sauce Mapaketi, Mutsva Bean Curd Stick, Vana Mabhisikiti, Ladyfinger Cookie,